Quotes | Chikunguru 2021
35 Kunyemwerera Makotesheni Achave Iwe Uchinyemwerera Kubva Nzeve Kusvika Kunzeve
Aya makotesheni uye zvirevo pamusoro pekunyemwerera uye kunyemwerera zvichaisa hombe kumeso kwako. Tsvaga humwe mufaro, mufaro, uye rudo nekuisa kunyemwerera.
Verenga Aya makumi maviri Makotesheni Pamusoro Pokusurukirwa Kuti Urerukire Hwako
Aya makotesheni nezvekusurukirwa anotsvaga kuratidza kuti kunzwa kusurukirwa kana wega hausi chakaipa nguva dzose. Dzimwe nguva kuzviparadzanisa uye kuva wega kunogona kuva kwakanaka.
101 Yeye Akanakisa Mapfupi Makotesheni Nezve Hupenyu
Kutsvaga mamwe mapfupi makotesheni ekushandisa muhupenyu hwako hwezuva nezuva, pasocial media, kana kungokukurudzira iwe? Tarisa uone uku kuunganidzwa kwe107 mapfupi uye akareruka makotesheni anorongedza ane simba punch.
Makumi mana Kubuda kwezuva Uye Zuva reKunyura (Kufuridzirwa Kwemangwanani & Manheru)
Akanaka makotesheni nezvekubuda kwezuva nekuvira kwezuva. 'Chandinoziva chokwadi ndechekuti kubuda kwezuva kwese kwakafanana nepeji nyowani, mukana wekuzvigadzirisa pachedu uye nekugamuchira zuva rega rega mukubwinya kwaro kwese. Zuva rega rega rinoshamisa. '
Aya mazwi ekutaurirana anogona kukubatsira kuti ugadzire hukama huri nani nekukubatsira iwe nekuteerera kwako, kunzwisisa, uye kugona kutaura.
32 Kunakidza Kunoshamisa Dr. Seuss Quotes Akarongedzwa Neakadzama Hupenyu Zvidzidzo
Aya anokurudzira Dr. Seuss makotesheni haasi evana chete - chero munhu wezera ripi zvaro anogona kudzidza zvakawanda nezve hupenyu nekuaverenga. Huya utarise.
Mashoko Ekukurudzira: 55 Anosimudzira Makotesheni Kuti Akurudzire Uye Kufuridzira
55 inosimudzira makotesheni ekukupa iwe mamwe mazwi ekurudziro kana iwe uchida zvishoma zvishoma kuzvitenda-kwako kukunda muhondo yepfungwa.
40 Kufuridzira Makotesheni Nezve Hupenyu Hwakavimbiswa Kujekesa Zuva Rako
Chero nguva apo mweya wako unoda kusimudzwa, zvinyurise mune aya ekukurudzira makotesheni nezve hupenyu uye tarisa semufaro uye kurudziro inokura kubva mukati mako.
3 Makotesheni Nezve Simba & Ushingi Kune Paunonzwa Iwe Haugone Kuenderera Mberi
Aya matatu akatorwa kubva kuna Aristotle, Anne Frank, naNelson Mandela achakubatsira iwe kuwana simba uye ushingi hwekuenderera mberi kunyangwe iwe uchinzwa kuti haugone.
Makotesheni makumi mashanu Nezve Runyararo Rwomukati Kukubatsira Iwe Kuwana Yako
Kuwana runyararo rwemukati chinhu cheupenyu hwese, asi kuverenga nekufungisisa aya manomwe akatanhamara makotesheni anogona kukubatsira kuti uwanezve ako nekukurumidza kana iwe uchinge warasikirwa nawo.
Ndeapi eaya makotesheni kubva kuunyanzvi hwekugadzira aive Shel Silverstein aunofarira?
Verenga aya makumi maviri nemaviri ematauro ekuti ugovimba ura hwako zvakanyanya uye nekufamba kwenguva. Ramba uchitaurirana nemanzwiro ako izvozvi.
15 Zvakakwana Zvinokatyamadza Quote Kubva Kubva Kuuraya A Mockingbird
Gara kumashure uye unotora huchenjeri husingagumi kubva kuna Harper Lee's classic tale. Aya mazwi kubva kuKill a Mockingbird ari akakwana kukwana.
Pemberera chinzvimbo chako seyekutanga neyekuunganidzwa kweanonzwisisa makotesheni nezvezvinhu zvekuve wega.
26 Yeakanyanya Simba Makotesheni Ese Nguva
Isu takanyatso sarudza iyi muunganidzwa yemakumi maviri nenhanhatu makotesheni atinonzwa kuti ndeemamwe ane simba kwazvo akambotaurwa kana kunyorwa.
Verenga aya makotesheni kuti akubatsire kurega zvinhu zvese zviri kukutadzisa muhupenyu. Kurega ndicho chinhu chakanakisa chaungaite.
29 Isingagumi Ishe WeRings Quotes (Uye Vamwe Kubva Pakati Pasi)
Kutanga kuda kwako neiyi muunganidzwa weakanyanya kuchenjera uye anonyanya kukosha makotesheni kubva kuTolkien's Middle Earth ngano.
50 Yakakosha Paulo Coelho Makotesheni Anochinja Hupenyu Hwako
Zivhura huchenjeri hunoshamisa mumabasa uye mazwi aPaul Coelho. Aya makumi mashanu makotesheni ndeake akanakisa uye achanyatso shandura hupenyu hwako.
Zvinyorwa gumi neshanu zvekurangarira Paunenge Uchinzwa Kurasika Muhupenyu
Kana iwe uchinzwa kurasika muhupenyu, sekunge iwe kunge usiri kuziva kwauri kuenda, aya gumi nemashanu makotesheni achakubatsira iwe kuwana yako nzira yekudzokera kunzira zvakare.
Nakidzwa nekuunganidzwa kunonakidza kwemakotesheni uye ndima kubva kuThe Wind In The Willows - vanozoisa kunyemwerera pachiso chako pasina kukundikana.
zvinorevei kuva nharaunda
zviratidzo ari kundifarira
handina chero matarenda
maitiro ekuisa miganho muhukama
kudanana nemurume akaroora makotesheni
zvinhu kune kana iwe uchinetseka